काठमाडाैंचैत २८, २०७६ रासस चीनमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको सय दिन पुगेको छ । नेपालमा पनि यो सङ्क्रमण समुदायस्तरमा अर्थात् दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । तपाईँले भन्नुपर्दा अहिले यस सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो छ ? हामीले शुरुमा यो रोगलाई नेपाल प्रवेशमा निषेध गर्नाका साथै यसविरुद्ध जनचेतना जागरणको माध्यमबाट रोकथाम अपनाएका थियौ...
मंसिर,२८ प्रकाश सिलवाल/सिबी अधिकारी- नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख जगका रुपमा पर्यटन क्षेत्रलाई स्थापित गर्ने सङ्कल्पसहित राष्ट्रिय अभियानका रुपमा मनाउन लागिएको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ शुरु हुन अब दुई साता मात्रै बाँकी छ । सन् २०२० जनवरी १ तारिखमा काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा विशेष समारोहसहित भ्रमण वर्षको औपचारिक शुभारम्भ गरिँदैछ । सरकारले...
रासस काठमाडौं,असोज २० मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ यही असोज अन्तिम साता नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन् । चीनबाट लामो समयपछि नेपालमा यो उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो । उनको भ्रमणका लागि नेपाल सरकारले व्यापक तयारीसमेत गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा चीनले अघि सारेको बिआरआई (एक क्षेत्र एक मार्ग) परियोजना सम्झौतामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीक...
मेरो तन मन नेपालको एकीकृत जनक्रान्तिमा छ बीबीसी जेठ १७ तपाईँले डाक्टरी किन पढ्नु भएको? यो धेरै पुरानो र पहिलेको कुरासँग जोडीएको छ। बाल्यकालसँग पनि जोडीएको छ। १० वर्षे द्वन्द्वकालमा देखेको चित्र र म आफैँले भोगेको पीडा पनि छ। त्यो बेलामा रोल्पामा हजारौँ कमरेडहरूले आफ्नै आँखा अगाडि दिएको बलिदानी र क्रान्तिले त्यतिखेर भोग्नु परेको क्षति - यिन...
गोरखापत्र तपाईंले भर्खरै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली महाअभियानका लागि देशैभर हजारौं–हजार केपी ओली जन्माउनु पर्छ, हर क्षेत्रमा स्वप्नदर्शी केपी ओली जन्मनु पर्छ भन्नु भएको विषय यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भैरहेको छ । के भन्न खोज्नु भएको हो ? हाम्रो समाजमा अझै यथास्थितिमा रम्न चाहने प्रवृत्ति हावी छ । परिवर्तनको कुरा गर्नेहरू पनि यथास्थितिको स...
बीबीसी अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँगको तपाईँको भेटवार्ता कस्तो रह्यो? भेटवार्ता एकदमै महत्त्वपूर्ण र सौहार्दपूर्ण रह्यो। छलफल एकदमै उपलब्धिपूर्ण भएको छ। लामो अन्तरलपछि दुई देशबीच यो स्तरमा कुराकानी भएको हो। ठूलो अपेक्षा बोकेर म यहाँ आएको थिएँ त्यो अपेक्षा प्रभावकारी रूपमा पुरा भएको महसुस गरेको छु। त्यो भेटवार्तामा तपाईँले के कुरा राख्नुभयो? ...
प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शुक्रबारदेखि हुन लागेको तीनदिने भ्रमणलाई विगतका केही वर्षमा भारत–नेपालका सम्बन्धमा भएका गतिविधिलाई ध्यानमा राखेर कुरा गर्नुपर्छ होला । नेपालको संविधान जारी भएपछि जे–जस्ता संवाद दुई देशबीच भए । अनि त्यसपछि भएका घटनालाई हेर्दा सम्बन्धमा अप्ठ्यारोपन देखिएको...
फागुन ३ २०७४ .
पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कामना सेवा विकास बैंक बुटवलको सेवा विकास वैंक र पोखराको कामना विकास वैंक मर्ज भएर वनेको वैंक हो । राष्टिय स्तरको विकास वैंक वन्नका लागि अढाई अर्व पूजी आवश्यक हुने भएपछि मर्ज भएको यो वैंकले निकट भविष्यमै काठमाण्डौवाट कारोवार गर्दैछ । प्रस्तुत छ एकीकृत कारोवार पश्चात् वैंकको अवस्था र अन्य विषयमा केन्द्रीत रहेर सो...
छिट्टै पार्टी एकता गर्ने भन्दै एउटै घोषणापत्र बनाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडेका दुई वाम पार्टीहरु एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रक्रियामा पछिल्लो समय केही आशंका उब्जिएको छ। दुई पार्टीको एकता संयोजन समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। पार्टी नेतृत्व र सरकार गठनका विषयमा पनि दुई पार्टीका नेताहरुले फरक फरक धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।...
‘जूनलाई टाढैबाट हेर नजिकबाट हेर्दा दाग देखिन सक्छ धब्बा देखियो भने फेरिफेरि नजिक हेर्न मन नलाग्न सक्छ' नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले हरिभक्त कटुवालका यी पंक्ति सुनाएर कुराकानी थाले। रातको नौ बजेको थियो। ओली लामै बात मार्ने मुडमा थिए। कोठामा कालो चिया ल्याइयो । ओलीले प्रसंग अगाडि बढाए। ‘हरिभक्तले त्यसो भन्नु पछाडि कारणहरू थिए । तर ...
२०१३ साल पौष ७ गते पाल्पाको रामपुरमा जन्मिएका हुन् भोजप्रसाद श्रेष्ठ । २०४४ सालदेखि बुटवलमा वसाइ सराइ गरेका भोजप्रसाद श्रेष्ठ आज बुटवल मात्र होइन मुलुककै विकास अभियान्ताका रुपमा परिचित छन् । अविरल राजनीतिक आन्दोलनसंगै सामाजिक विकास अभियानमा समेत श्रेष्ठले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउंदै आएका छन् । बुटवलको योजनावद्ध बिकास प्रारुप जुन आज पन...
प्रदेश नं ५ मा वाम गठवन्धनले दुई तिहाई ल्याउँछ : शंकर पोख्रेल
काठमाडौं : नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोख्रेल दाङ क्षेत्र नम्बर २ को '१' बाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार छन्। पोख्रेल प्रदेशमा उम्मेदवार बनेपछि दाङ र प्रदेश ५ अन्तर्गतका जिल्लामा समेत उनको चुनावी गतिविधिलाई चासोका साथ हेरिएको छ। वाम गठबन्धनले उनलाई प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको छ। उनले आफूसँग प्रदेशको विकास...
असोज १७ २०७४ ekhabarnepal
असोज १७ माओवादी केन्द्रले एमाले लगायतका दलसँग प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने रणनीति लिएको छ । माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकले निर्वाचनका लागि आवश्यक तालमेलदेखि पार्टी एकता गर्नेसम्मको निर्णय गरेको छ । दुवै निर्वाचनमा दुई पार्टीबीच सहमति जुटे एउटै चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा जाने समेत छलफल भएको छ । यद्यपि, माओवादी केन्द्रक...